ထို့ ကြောင့်…ဤအရာကို နွား ဟုခေါ်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထို့ ကြောင့်…ဤအရာကို နွား ဟုခေါ်သည်
Posted by ရာမည on Mar 27, 2013 in Creative Writing, Editor's Choice | 45 comments
ကျွန်တော် ဒီရွာမှာ ဝါသနာပါတဲ့ မှုခင်းဝတ္တုလေးတွေရေးချင်လို့ ဝင်ခဲ့ တာပါ ။
အရှုပ်အထွေးတွေကိုရှောင်ပါတယ် ။ ကိုယ်က အရှုပ်တွေရေးသူဆိုတော့ဝင်မရှုပ်ချင်တာလည်း တစ်ကြောင်း
ရင်းနှီးသူနဲပါးတော့အထင်မှားမှာလည်း တစ်ကြောင်း စသည်တို့ ပေါ့ ဗျာ ။
အခုတော့လမ်းကြောင်းနဲနဲသွေဖယ်ပြီး ကြုံဖူး ကြားဖူးတာလေးတွေ ပြောချင်ပါတယ်
နွား နဲ့  ပါတ်သက် တာလေးများကိုမြင်ဖူး ကြားဖူးသမျှ ပါ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နွားကို
ဘက်စုံ သုံးဖြစ် သုံးကြသလိုချစ်လည်း ချစ်ကြတဲ့ သူတွေရှိပါတယ် ။ မချစ်သော်လည်း
ထမင်းရှင် ၊ ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီး အမွှန်းတင်သူများလည်းတွေ့ ဖူးပါတယ် ။ သူတို့ နွားကို မခိုင်းဘူးလား ?????
ခိုင်းပါတယ် …. ဘယ်သူမှအစာကျွေးပြီး အလကားမမွေးထားပါဘူး ။
နွားတွေက ပြုစုပေးရတယ် ။မယုံမရှိနဲ့  ညောင်းရင်နှိတ်ပေး နင်းပေးရပြန်ပါရော ။ ဒါမှနို့ ကောင်းကောင်း
ထွက်ပြီး ခိုင်းကောင်းပါသတဲ့ ။ ပြီးတော့စိတ်မကြည်ရင် နို့ ထွက်နဲသလို ခြင်ကိုက်လို့ အိပ်ရေးပျက်ရင်လည်း
ပေကပ်ကပ်နဲ့ ခိုင်းလို့ မရပါဘူး ။ဒါကြောင့်နွားခြင်ထောင်တို့ နွားခြင်မီးထည့် ပေးတာတို့လုပ်ရပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ နွားကိုအထူးကျွမ်းကျင်တာကတော့အထက်အညာက လူတွေပါ ။
သွားဖြဲမပြနဲ့  နွားပွဲစားမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ် ။နွားရဲ့ သွားကိုကြည့် ပြီး အသက်ကို
မှန်းလို့ ရတဲ့ အတွက် အရောင်းအဝယ်မှာ ပွဲစားကသွားကိုကြည့် တာပါ ။ ထို့ အတူပါပဲ နွားပွဲဈေးမှာ နွားဝယ်
သူများက ခွါအကျအပေါက်ကိုကြည့်ပါသတဲ့  ။နွားက သွက်လက်ချက်ချာပြီး ရုန်းအားကောင်းမကောင်းကို
လေ့ လာတာပါ ။ ဒီအခါမှာ အညာအရပ်ကနွားပညာရှင်ကြီးများက နွားသတ်ရုံပို့ မယ့်နွားအို နွားထိုင်း
နွားထူတွေကိုရေချိုး ပြီး သန့် ပြန့် နေအောင်ထားပြီး နွားပွဲဈေးကိုလာရောင်းတတ်ပါတယ် ။
နွားရဲ့  တင်ပါး ပေါင်ရင်း စတဲ့ နေရာသုံးလေးခုမှာတော့ သံ ချောင်းသေးသေးလေးတွေကိုသုံးရက်ကြိုလောက်က
ရိုက်ထည့် ထားနှင့် ပါတယ် ။ နွားပွဲဈေး ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့အနာကရင်းနေပါပြီ ။ နွားလာကြည့် တဲ့ 
ဝယ်သူတွေရှေ့ မှာ သံရိုက်ထားတဲ့ နေရာကိုပုတ်ပြလိုက်တာပေါ့ ဗျာ ။နွားက နာလို့ ရုတ်တရက်ရုန်းကန်တာ
ကိုပဲ ခွါကျကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းပါတယ် ။နားမလည်ရင် နွားအိုကြီးနဲ့  ပိုက်ဘော
မိပါလေရောဗျာ ။ နားလည်သူများကျတော့နကိုကတည်းက ဘီးစိတ်လေးယူလာပြီး အမွှေးတွေကြားထဲ
ခြစ်ကြည့် လိုက်ရင် စောစောကရိုက်ထည့် ထားတဲ့သံချောင်းကို သွားတွေ့ ပါတယ် ။
နွားကန်တော့သူများပင်စိမ်းပင်ကန်တော့ သူများနဲ့  နေလုံးကန်တော့ သူများလည်း
တွေ့ ဖူးပါတယ် ။အများအားဖြင့် ဟိန္ဒူ တွေပါပဲ ။ သူတို့ က ဘာသားမှမစားဘဲ ပဲနဲ့  အသီးအရွက်များကိုသာ
စားကြပါတယ် ။ နွားကို ခိုင်ပြီး အိုချိန်မှာ ကျွေးထား သေရင်မြေမြှုတ် အဲ့ လိုလုပ်တာမမြင်ဘူးပါဘူး။
နွားသတ်ရုံပို့ ရင်ပို့ မပို့ ရင် အချဉ်ရှာပြန်ရောင်း ……
တောရေး တောင်ရေးနဲ့  စာတော့ ဖြစ်သွားပြီ ။ပြောချင်တာက
နွားကို နွားလို့ မြင်ကြည့်ပါ ။
နွားကြောင့်မီးမလောင်ပါစေနှင့်။
နွားကြောင့် အမုန်းမပွားပါစေနှင့် ။
နွားသည် အပယ်လေးပါးမှ တရိစ္ဆာန် ဘုံမှသာဖြစ်သည် ။
ထို့ ကြောင့်……….ဤအရာကို နွားဟုခေါ်သည် ။
ဟိန္ဒူတွေက.. နွားသားမစားပေမယ့်..မွေးပြီးအပြင်ထုတ်ရောင်း တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရှာကြတဲ့သဘောရှိတယ်..
အဲဒါကြောင့်ပြောတာ.. ဟိုမရောက်ဒီမရောက်.. ဇော်ကန့်လန့်က..ဆိုးပါတယ်လို့..။
၂၀၁၀စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အထုတ်ဆုံး ၁၀နိုင်ငံပေါင်းတွက်တာနဲ့တင်.. တရက်နွား 705394ကောင်သတ်နေကြတဲ့သဘောရှိပြီး…
အိုမိုင်ဂေ့ါ.. ။ လူသားများ.. :buu:
Of the top 10 beef producing countries, the U.S. holds a
25% market share for 2010. Brazil, EU-27, China and Argentina
fill out the top5for beef producing countries. Interestingly, Canada
does not appear in the top 10 for either cattle or beef production,
ranking 11th for both. FAS says Brazil’s beef output this year
will be 4.1% larger than in 2009. Only three other countries in the
top 10 — India, Mexico and Pakistan — will see higher beef production
this year according to FAS.
Seeing India in that list may beasurprise to some readers
but, as the table shows, India produces more CATTLE than
any other country. Brazil ranks second on both the cattle and beef
lists while China ranks third in cattle production and fourth in beef
production — perhaps another surprise. But always remember
that any number from China is pretty mind-boggling.
U.S. Commercial Slaughter	Head of Cattle
~~~~~~~~~~~~~~~~~ အကြောင်းရင်း စဉ်းစားဘွယ် ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ယခုအခါ ခေတ်အတွင်းမှာ၊ နွားသားဟင်း ကျွဲသားဟင်း၊ အသန့်ပင် လွတ်ကင်းအောင်၊ ရှင်းရှင်းကြီး စင်ပြောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ရှောင်ပါသည်၊ နောင်လာရန် အဖို့၊ ကြားသမျှ ကရို့ရယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူ၊ သဘောထား ဖြူကြပါ။
လူတို့လို တီတီတာတာ၊ မပြောတတ် ရှာကြလို့၊ ငုတ်တုတ်သာ မပြန်လှန်၊ ပြုသမျှ ခံရသည်၊ ဌာန်ကရိုဏ်း ပြတ်သား၊ နှုတ်လျှာများ တတ်အားလျှင်၊ နွားတို့က ဆိုရန်၊ ခွင့်ရှိသည် အမှန်မှာ၊ မြန်မာနှင့် ကုလား၊ နှစ်ပြည်ထောင် တိုင်းသားတို့၊ ဖြစ်ပွားသည့် တွက်တာသည်၊ ငါတို့မှာ သတ္တု၊ အကုန်လုံး စုချေသည်။
သူတို့ဘေး သူတို့ဘိုး၊ သူတို့နွယ် တစ်ရိုး၊ တစ်မျိုးလုံး တစ်ဆွေလုံး၊ သူတို့တိုင် မဆုံး၊ တို့တစ်တွေ ပုခုံးမှာ၊ မီးဟုန်းဟုန်း ထမတတ်၊ တို့လုံ့လ တို့စွမ်းအင်၊ တို့အပန်း ခံနိုင်လို့၊ ဆန်စပါး ပြောင်းနှမ်း၊ ဗူးခရမ်း ပဲအမျိုး၊ မြေပြင်လုံး မောက်ဖြိုးအောင်၊ တိုးတက်သည့် ဘဏ္ဍာနှင့်၊ လိုရာတိုင်း ပြည့်စုံ၊ ကုံလုံကြ အသီးသီး၊ ကျောင်းကြီးဆောက် ဘုရားတည်၊ တစ်တိုင်းလုံး ကြွယ်သည်မှာ၊ ဘယ်သူက အရင်းဟု၊ စဉ်းစားဖွယ် မရှိ၊ ထင်အလင်း သိပါလျှက်၊ သတိပင် မပေါ်၊ ကျေးဇူးကို မမျှော်၊ စိတ်အချော် တိမ်းပါး၊ မိတ်မတော် စိမ်းကားလျှက်၊ တို့အသား တို့အသည်း၊ တို့အဆီ ရွှဲရွှဲကို၊ ထမင်းပွဲ အလယ်၊ အနင့်သား တည်ပြီးလျှင်၊ ရယ်ခါနှင့် ပြုံးခါ၊ အရသာ ခံစား၍၊ လင်မယား တစ်တွေ၊ မြုံ့ကြသည့် အနေမှာ၊ မြိန်နိုင်ပေ့ သူတို့ကိုယ်၊ မျိုနိုင်ပေ့ သူတို့ခံတွင်း၊ တို့လုပ်သည့် ထမင်းကို၊ တို့ဟင်းလျာ အသားနှင့်၊ စားကြသည့် ဖြစ်နဲကို၊ တို့အသည်း နာလိုက်ကဲ့၊ ကမ္ဘာဦး စတင်၊ ထက်ကာရီ ယခင်က၊ ချေသမင် တောသား၊ အများတို့ ထုံးစံ၊ တိရိစ္ဆာန် စရိုက်၊ တို့ဘာသာ တစ်သိုက်၊ အလိုက်များ နေခဲ့ကြလျှင် ၊ မသေမီ စပ်ကြား၊ အိပ်ချင်အိပ် စားချင်စား၊ သွားချင်သွား လာချင်လာ၊ အပုံကြီး ချမ်းသာမည်။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ အဓမ္မလူသား ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ယခုမှာ လားလား၊ အဓမ္မလူသားနှင့်၊ စီးပွားတူ ချမ်းသာဖက်၊ ခိုမိသည့် အတွက်ကြောင့်၊ တက်တက်ကြီး အကုန်မှား၊ ငါးပါးမှောက် ခြောက်ပါးမှောက်၊ မှားသလောက် မပြောသာ၊ သက်ခန္ဓာ ရှိစဉ်လည်း၊ မချိအောင် စေစား၊ တို့ကိုယ်ကောင့် အသားကို၊ ဟင်းတစ်ပါး သတ်၍လုပ်၊ ဘယ်သင်းက ဟုတ်သေးတုံး၊ ယုတ်မာသည့် ဖြစ်လား၊ သည့်လောက်တောင် ရိုင်းငြားသည့်၊ လူသားတို့ လက်ထဲတွင်၊ ဖွဲ, ပြောင်းရိုး, မြက်, ရေ၊ သုံးစား၍ နေရသည်ထက်၊ တောကျားတွေ ပါးစပ်မှာ၊ ခေါင်းပြတ်၍ သေရခြင်းသည်၊ လွန်အမင်း မြတ်သေး၏။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ အဟော ဒုက္ခ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရှေးအထက် ကာရီ၊ ပဝေဏီ အခြေက၊ ရေလိုက်ကြီး မှောက်မှား၍၊ တို့နောက်သား တစ်စုမှာ၊ လူဘီလူးအစာ၊ ဟင်းလျာဘို့ အပြီး၊ ဘူးသီးနှင့် ကြုံလိုကြုံ၊ ဖရုံနှင့် ငြားလိုငြား၊ သခွားနှင့် တွဲလိုတွဲ၊ ချိုတစ်နည်း ချဉ်တစ်ထွေ၊ တို့ဖြစ်ပုံ အနေနှယ်၊ သေလျှင်လည်း လတ်တလော၊ ရှင်စဉ်လည်း ဖတ်ဖတ်မော၊ အဟောဒုက္ခ၊ ဘယ်အခါတွင်မှ၊ သက်သာရာ မရအောင်၊ တို့ကြမ္မာ ပြုနည်းကို၊ အသည်းထိ နာလိုက်ပါဘိ၊ ဉာတကာ တစ်သင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းတို့ဟု၊ နွားအချင်းချင်း ဆိုကြရန်၊ ခွင့်ရှိသည် အမှန်ပင်။
သနားရန် တာလမ်း၊ ရှိသမျှ စခန်းကို၊ ဆုံးခန်းရောက် မျှော်ခေါ်၍၊ မသူတော် စရိုက်၊ ထွန်းကားသည့် အခိုက်ကို၊ အလိုက်သင့် အရှောင်ကောင်းနိုင်မှ၊ နောင်နှောင်းကို ချမ်းသာ၍၊ နတ်ရွာမှာ အတူတွေ့ကြရအောင်၊ အလေ့ကောင်းရှင်းရှင်း၊ ဇောသဒ္ဓါ စင်းစင်းနှင့်၊ သတင်းစာ ပါးလိုက်ပါသည်၊ ကြားကြားသမျှ မိတ်ဆွေအပေါင်း၊ သူတော်ကောင်း ပညာရှိတို့။ ။
In Hinduism, the cow (Sanskrit: go) is revered as the source of food and symbol of life and may never be killed. Hindus do not worship the cow, however, and cows do not have especially charmed lives in India. It is more accurate to say the cow is taboo in Hinduism, rather than sacred.
TAKE A BY T E OUT OF B E E F NUTR I T ION!
Calorie-for-calorie, beef is one of the most nutrient-rich foods. Not only does it
provide you withabundle of essential nutrients, but it has one of the highest
concentrations of these nutrients compared to many other proteins.
Beef is the #1 food source for Protein, Vitamin B12 and Zinc!
•	A three-ounce serving of lean beef contributes less than 
nutrients. Based ona2000-calorie diet, just3ounces
of lean beef provides you with:2,3
Protein—Helps buildastrong and muscular body
Zinc—Helps createahealthy immune system & heal wounds
Phosphorus—Necessary for strong teeth and bones
Iron—Helps carry oxygen in the blood to all cells and
muscles to prevent fatigue
(including Vitamin B12,
Niacin, Vitamin B6 and
ဦးကြောင်ရေ .. သူကြီး အမဲသားကြိုက်တာ ယုံပါပြီဗျ……. :hee: :hee:
သဂျီးကလည်း ပိုစ့်တစ်ပုဒ်လောက်ကို မန့်တာပါလား။
သဂျိုင်ခီးတယောက် …သူ တယောက်တည်း ၄ခု ဆက်တိုက်မန့်တာ ဒီတခါပဲ မြင်ဖူးသေးတော့တယ်…
ဟုတ်ကဲ့ ကိုရာမညရေ ..
ကျနော်လည်း နွားကို နွားလို့ပဲမြင်မိသဗျား..
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ဖူးတာကတော့ နွားကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပုံရိပ်ကောင်း တည်ဆောက်တဲ့ ..ရွှေမြန်မာများပါဘဲ..
ကတ်စတမ်မာနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ..အမဲသား(နွား) မစားကြောင်း … မြန်မာပြည်ဟာ မတိုးတက်သေးတဲ့
အကြောင်း .. ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးမှု များတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ကြောင်း.. လယ်သမားတွေက နွားနဲ့ဖက်ပြီး ရုန်းနေရကြောင်း
သူ(သူမ) ကတော့ အထက်က နွားဋီကာ ကလို သဘောတွေကို နားလည်လက်ခံထားသူဖြစ်လေတော့ ..
အမဲသားမစားကြောင်း … (တိန်… သူက လယ်ပိုင်သူ လယ်လုပ်သူ လည်း မဟုတ်သည့်တိုင်
မိဘကြောင့်သော်လည်းကောင်း အခြားအကြောင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း အမဲသား မစားသူသက်သက်ာ..)
စီကာပတ်ကုံးဖွဲ့နွဲ့ပြောတတ် ကိုယ်ရည်သွေးတတ်ကြသဗျ…။ သိတယ်မလား ..တာဝန်သိသူ၊ စာနာထောက်ထားတတ်သူ
သမာသမတ်ရှိသူ ဆိုတဲ့ image မျိုးရမလား ပေါ့လေ….။ တကယ်ကဗျာ ..အဲ့ဒါတွေက တမင်လုပ်ယူစရာ
(အမဲသားမစားတာ ပြောပြရုံ လောက်နဲ့ တည်ဆောက် ရစကောင်းတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမဟုတ်တာပါပဲ)
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း လုပ်အား ဇွဲလုံ့လ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး စတာတွေနဲ့ သာ customer ကို
စွဲဆောင်ရမယ် မဟုတ်လား… ရေလိုက်လွဲတာ ပြောပါတယ်.. first impression ရမလား ဆိုပြီး ထုတ်သုံးတဲ့
ဟီးဟီး … ကံဆိုးရှာဒယ်… လုံးဝ(လုံးဝ) မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ရှာဘု…။
ကိုဘေးနွား ကမ္ဘာကို ရောင်းစားနေတဲ့လူမျိုးတွေ ဆိုတာ မေ့နေရှာတယ်လေ…။
ဂျပန်က သူ့ကို ပြန်မေးပါတယ်… ဟုတ်ပြီ ..ခိုင်းနွား သတ်မစားသင့်တာ လက်ခံတယ်..
ဟောဒီ ပန်းကန်ထဲက နွားက ဘီယာတိုက် မာဆတ်ပေးပြီး သတ်စားဖို့ သက်သက် မွေးထားတဲ့နွားတဲ့ ..
case by case မတူဘူးတဲ့ ..စားကောင်းတယ် ..စား .. စား ..။ တဲ့ ..
ဒါက နည်းနည်း ယဉ်ကျေးတဲ့ လူတွေ ပြောတတ်တာ ..
အဲ … နည်းနည်း offensive ဖြစ်တဲ့လူတွေကျတော့…
သတ္တ၀ါ အသက်ကို သတ်တာ အပြစ်ဆိုရင် ..(အသားမစားရင်လည်း အာဟာရမပြည့်ဝူးဆိုရင်)
နွား(အမဲသား) မစားရင် .. နွားတကောင် သေရမယ့်အစား ..၀က် ၁၀ကောင်
ဒါမှမဟုတ် ကြက် အကောင် ၂၀၀ လောက် သေစေရော့သလား ..တဲ့ ….
သတ္တ၀ါ ငယ်ငယ် ကို သတ်ရတာထက် ပိုမို အားစိုက်ရတယ်
ပိုမို အားထုတ်ရတယ် တဲ့ အဲ့သည့်အတွက် ပိုပီး အကုသိုလ်ကြီးတယ် ဆိုပဲ..
ဒါ့ကြောင့် (အသားလည်း မစားဘဲ မနေနိုင်သေးတဲ့အတွက် စားတော့စားသုံးနေတယ်..
သို့သော် ..)ခြေလေးချောင်း ရှောင်ပါသတဲ့
(သိသူများပြောပါအူး ..ဘုရားအဲ့လိုဟောသလား ဆိုတာ.. ဘုရားက ခြေအရေအတွက်နဲ့
အကုသိုလ်ပမာဏ ကို ဘယ်လိုညီမျှခြင်းချပြဖူးတယ်ဆိုတာ..)
အဲ့လာပြောတာပေါ့.. ပင်လယ်ပြင် တခုတ်တရထွက် ..လောင်စာ တွေသုံး လုပ်အားတွေသုံး
ပြီး ဖမ်းကြပါတဲ့ ငါးဒွေ….မိမိခြင်း မသေမရှင်ကို ချက်ခြင်းတန်းပီး ရေခဲ ရိုက် ..
ကမ်းစပ်ရောက်တော့ ရောင်း..ကျန်းးးး ကြီးလိုက်ပါတဲ့အကုသိုလ် …
ငါးဆိုတာ အရောင်ခွဲမြင်မှု နည်း(မျက်စိမွဲပါသတဲ့)
သူတို့နဲ့ အရွယ်တူ ကုန်းသတ္တ၀ါ ထက်လည်း ပျမ်းမျှ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါသတဲ့ …
အဲ့အကောင်ဒွေကို တခုတ်တရ သွားဖမ်းပြီး မသေမရှင် ရေခဲရိုက်သတ်တာ .. စားကောင်းဒယ်ပေါ့…
ခြေလေးချောင်းရှောင်တဲ့ ဆြာတွေ ငါးမန်းတောင် ဟင်းချိုသောက်တာ
ကျောက်ပုစွန် ၀ိုက်တာ …ပြည်ကြီးငါး ကင်စားတာ … ကောင်းဒယ်ပေါ့..
သာဓု ဒုက္ခ အနတ္တ..
ဥပဒေသ။ ။ ခိုင်းရင်မစားကြေး စားရင်မခိုင်းကြေး။
မြိန်နိုင်ပေ့ သူတို့ကိုယ်၊ မျိုနိုင်ပေ့ သူတို့ခံတွင်း၊ တို့လုပ်သည့် ထမင်းကို၊ တို့ဟင်းလျာ အသားနှင့်၊ စားကြသည့် ဖြစ်နဲကို၊ တို့အသည်း နာလိုက်ကဲ့၊
ကျန်တာတွေ ဘာညာ သာရကာ ပြောမနေချင်တော့ဘူး…ဒီနွားဋီကာထဲက ဒီတစ်ကြောင်းပဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ….ကျွန်တော်တို့ကတော့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လယ်သမားမျိုးရိုးဆိုတော့ နွားတွေကို ချစ်တယ်…အစ်နေ့နီးလို့ နွားတွေ သူတို့ဘာသာ သူတို့အသတ်ခံရတော့မယ် ဆိုတာသိပြီး မျက်ရည်တွေ ကျနေတာမြင်တိုင်း တိရ စ္ဆာန် ပေမယ့် တကယ့်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်…ကျွန်တော်ကတော့ လူသားတစ်ယောက်ပါ…ချစ်တတ်တယ်…သနားတတ်တယ်…ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါတယ်…သံသရာထဲမှာ ကျင်လည်နေသမျှတော့ ကိုယ်လဲ တချိန်ချိန် ဒီ တိရ စ္ဆာန်ဘုံ မရောက်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်လို့လဲ…သူ့နေရာမှာ ကိုယ်ဝင်ရောက် ခံစားခြင်း ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာခြင်း ပါပဲ….
ဟိဟိ။ နပန်းစံ သီချင်း ဆိုတာနော်။
နွားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကား (ခပ်ရိုင်းရိုင်း) တစ်ခုပဲ။
ဘယ်လောက် ပွေတယ်၊ ရှုပ်တယ် ဆိုတဲ့ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ အတွက် နွားတစ်ကောင် ရှိတတ်တယ်” ဆိုလား ဘာလား။
ဒါက တော့ နွားကို နွား လို့ မမြင်တာမမြင်တာမဟုတ်တော့။
ပြီးတော့ နွားဆို မကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ နှိုင်းတာတော်တော်များတယ်နော်၊။
ခဏနေမှ နွားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံတွေ လာပြောမယ်။
သဂျီး ကော်မန့် ၄ ခုဆက်တိုက်မြင်လို့ အံ့ဩသွားတယ်။ မနက်က။
မခိုင်ဇာပြောသလိုက လူကိုနွားလို့ မြင်တာထင်တယ် ။
သူကြီးဦးခိုင်နှင် အတူ လာရောက်ဆွေးနွေးပေကြတဲ့ 
ကိုရင်ဖားသက်ပြင်း ကိုရင်ကထူးဆန်း ကိုရင်Johnnydeer မခိုင်ဇာတိုအားကျေးဇူး
သူကြီးရဲ့ ရှာဖွေဖေါ်ပြပေးမှုဟာ သိသင့် တဲ့ ဗဟုသုတများဖြစ်လို့ဝမ်းသာစရာပါ
ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ လွန်လွန်ကဲကဲ ဖွဲ့ နွဲ့ မှုတွေကြောင့်အမုန်းပွားအထင်လွဲမဖြစ်စေဖိုပါခင်ဗျာ။
နွားသား ကိုအားရပါးရစားဖို့ တိုက်တွန်းတာမဟုတ်သလို
စားသူများလည်း မေတ္တာနည်းလေခြင်းလို့ အပြစ်တင်ရန်မသင့် ပါ။
ဘာပဲစားစား လောဘ ဒေါသနဲ့ စားရင် ကိလေသာတံဏှာပွားပြီး
အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ် ။အမဲသားမှမဟုတ် အခြားအသားကိုလည်း ဘာသားကြီးကွ
ညာသားကြီးကွ ဆိုပြီးစားရင် လေဘတံဏှာဖိစီးတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားက
သတိတရားမဲ့  အဆင်ခြင်မဲ့ မစားမသောက်ဖို့ ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့ 
ပါတယ် ။ဒါကိုရှေးပညာရှိ ဆရာသမားများကဒီလိုစာစီခဲ့ ပုံရပါတယ်
” ဤသည့် စားဖွယ် အမယ်မယ်ကို ၊ မြူးရယ်မာန်ကြွ ၊ လှပရေဆင်း ၊ ပြည့် ဖြိုးခြင်းငှာ ၊ မသုံးပါဘူး ၊ လေးဖြာဓတ်ဆောင်
ဤကိုယ်ကောင်သည် ၊ ရှည်အောင်တည်သ၍ ၊ အသက်မျှတန်း ၊ မမောပန်းငြား
ဘုရားသာသနာ ၊ ကျင့် နှစ်ဖြာကို ၊ ကျင့် ပါနိုင်စေ ၊ ဝေဒနာဟောင်းသစ် ၊ မဖြစ်စေရ ၊
ရာပိုဒ်မျှလှစ် ၊ ခတ်သိမ်းပြစ်ကို ၊ မဖြစ်စေအောင် ၊ ချမ်းမြေ့ အောင်ဟု
သုံးဆောင်မှီဝဲပါသတည်း ” တဲ့ 
မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းများမစားအပ်သော အသားကြီးဆယ်မျိုးကို ပညက်တော်မူပါတယ် ။
မစ္ဇျိမတိုင်းမှာဖြစ်သော်လည်း အမဲသားတော့့မပါပါဘူး ။ မလိုအပ်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့် မယ် ။
ဒီနေရာမှာ လယ်တီဆရာတော်ကြီးက ဘာကြောင့် နွားမေတ္တာစာရေးသလဲလို့ တွေးကြည့် ရင်
ကျွန်တော်သိသလောက် အညာသူအညာသားများဟာ အမဲသား
အလွန်ကြိုက်ပါတယ် ။ အမဲခြောက်ဆိုရင်
အညာကလုပ်တာက ပိုကောင်းပါတယ် ။ဝက်ဆိုတာ အောက်ပြည်ကပို့ ရတာပါ ။ငါး ပုဇွန်မရနိုင်သလို အသီးအရွက်လည်းရှားပုံရပါတယ် ။
အဲ့  မှာ စားစရာ အမဲ နဲ့ ဆိတ် သားဘဲ ပေါပေါများများရတာပါ ။ဘဲဥဆိုတာလည်းအောက်ပြည်ကတင်ပို့ ရတာ
ရှေးအခါက သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးခက်ခဲချိန်မှာ ဒေသထွက်အစားအစာပဲ
အားကိုးရတာပေါ့။ ဒီမှာပဲ နွားတွေကိုတဖြုတ်ဖြုတ်သတ်စားနေတာကို
ဆရာတော်လည်း စိတ်မချမ်းမြေ့ ဘူးထင်ပါတယ် ။
ပြောရဦးမယ် …. အညာကအလှူဆိုတာ ခုနှစ်ရက်လောက် ထမင်းကျွေးတာ ဆိုတော့့
သတ်လိုက်ရတဲ့  ကြက်
နောက်ဆုံး ဘုန်ကြီးဆီရောက်တာကတော့ငှက်ပျောနှစ်ဖီး အုန်းသီးတစ်လုံး
ဝါးခြမ်းပြားမှာညှပ်ထားတဲ့  ငါးကျပ်တန် တစ်ရွက် !!!!!!!!
ဆရာတော်က ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဆုံးမခဲ့ ပုံပါပဲ
ဟုတ်ပြီ ဒါကြောင့် ………
ယနေ့ မှစ၍ နွားသား ဟု အမည်ခေါ်တွင်ခြင်း အလျှင်းမရှိစေရ !!!!!
တချို့ တချို့ အတွက်တော့ သဂျီးလို ကိုဘေးနွားမှစားသူအဖို့နွားအသတ်ခံရတာ မြင်ဖူးချင်မှမြင်ဖူးလာလိမ့်မယ်….
ကိုရာမညကော မြင်ဖူးရဲ့လားလို့မေးချင်ပါတယ်…..
နွားကို ခိုင်ပြီး အိုချိန်မှာ ကျွေးထား သေရင်မြေမြှုတ် အဲ့ လိုလုပ်တာမမြင်ဘူးပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ မှားတယ်လို့ မပြောပါဖူး…. လုံးဝမှန်တာတော့လည်းမဟုတ်ပါဖူး…..
ဒါပေမယ့် ၀ါးလုံးတချက်နဲ့ အကုန်ပတ်ရိုက်တာတော့ အဆင်မပြေလှဖူးခင်ဗျ……
ခိုင်းနွား… စားနွား… အလှပြနွား… နို့ စားနွား…. အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်…..
များသောအားဖြင့် လူတွေ တန်ဖိုးအထားဆုံး သံယောဇဉ် အရှိဆုံးက ခိုင်းနွားတွေပါ…..
နွားမကလို့ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာမွေးတဲ့ခွေးနဲ့လမ်းပေါ်က ခွေးတောင် သခင်တွေရဲ့ သံယောဇဉ် တူသလားလို့မေးချင်ပါတယ်……
လူတိုင်းကတော့ ကိုယ်မြင်တဲ့ဘက်က ပြောမှာပေါ့နော်……
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မြင်တာကမှ အမှန်လို့ ပြောရင်တော့ လွန်တာပေါ့…….
နင်မှာလည်း ပုဆိုးတထည် ငါ့မှာလည်း ပုဆိုးတထည်…. ချည်တအုပ်ထဲကထွက်တဲ့ ပုဆိုးချင်းအတူတူ…
နင့်ပုဆိုးကမှ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောတာတော့ လွန်တာပေါ့ကွယ်…..
ရေးတော့ရေးပါ…. အနှောင့်အပါးလွတ်အောင်ရေးပါ….. မဖွပါနဲ့ ကွယ်…. သဂျီးကို အားနာလို့ ပါ…..
ဟုတ်ကဲ့ အရှုပ်တွေရေးသူဆိုတော့ ၀င်မရှုပ်ချင်ဖူးပေါ့နော်…..
စာရိုက်နေစဉ်ဖြစ်လို့ကွန်မန့် တွေမမြင်လိုက်ရဘူး
ကျေးဇူးပါ ဦးခင်ခနဲ့  ကိုရင်တိမ်မည်းခင်ဗျာ …
ကျွန်တော့ သဘောထားတချို့ ကို ရေးပြီးဖြစ်သဖြင့်ဖတ်ကြည့် စေချင်ပါတယ်
ကျွန်တော် ဖွတယ်လို့ ယူဆရင် သက်ဆိုင်သူများက ဒီပို့ စ်ကိုဖျက်နိုင်ပါတယ်
သတ်ပုံ သတ်နည်းကြောင့် 
စသည်ဖြင့်အထွေထွေအကြောင်းပြချက်များနဲ့  ရန်ပွားခြင်းကိုမဖြစ်စေလိုတာပါ
ဘယ်အကောင်သတ်သတ် ….စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ
နွားသတ်မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး အခြားသတ်တာဆိုရင် ?????????
ပို့ စ်မဖျက်သေးဘူးဆိုရင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်
၁၀တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာ အိမ်က ဝက်၊အမဲ ရှောင်တာနဲ့ 
မင်းသိင်္ခရဲ့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဝတ္ထုထဲမှာတော့
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက ၊ ဝမ်းရောဂါကပ်ကြနေတဲ့ သူတွေကို ရေမန်းနဲ့ လိုက်ကုရင်း အမဲသား မစားဖို့ အလှူခံကြောင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်
ကွန်မန့် ချီးမြှင့် သွားတာ ကျေးဇူးပါဦးပေ
ပြုခဲ့ သူပါ ။သူ့ တပည့် ထဲကထင်ရှားသူများကတော့အနာဂါဏ်ဆရာသက်ကြီး ဖြစ်ပြီး
ဆရာသက်ကြီးရဲ့ တပည့် ကတော့ ဦးဘခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဦးဘခင်ရဲ့ တပည့် ကတော့ယနေ့ ကမ္ဘာတလွှားမှာ နာမည်ထင်ရှားလှသော
ဦးဂိုအင်ဂါ ပါခင်ဗျာ ။ ဒီလို နေလိုလလိုထင်ရှားတဲ့  ကမ္မဌန်းဆရာတော်ကြီးက
ရေမန်းမသုံးလောက်ပါဘူး ။ ဆေးလည်း လှည့် လည်မကုလောက်ပါ
အမှတ်မှားပြီး ဂုဏ်သရေညှိုးနွမ်းမှာစိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဖြစ်နိုင်တာက ပရိတ်ရေ ပဌန်းရေ တိုက်ခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း
ဆေးကုဆိုတာထက် လှည်လည်ကြွချီရင်း မေတ္တာ ကမ္မဌန်စီးဖျန်းတာဖြစ်နိုင်ကြောင်း
ဝေသာလီပြည်သို့မြတ်စွာဘုရားကြွပြီး ပရိတ်တော်ချီးမြှင့် သကဲ့ သို့ 
ဘေးသင့် သောအရပ်တွင် ပရိတ်တော်ချီးမြှင့် သည် ဟုထင်မြင်မိပါကြောင်း
ရေမန်းနှင့် ဆေးကုသည်ဟုဆိုပါက ဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီး ဆေးဘုန်းကြီးဟု
ထင်မြင်မှာစိုးသဖြင့်ကြားဖူးမှတ်ဖူးသမျှလေးပြောတာပါခင်ဗျာ
ဖတ်ဖူးသလောက်တော့.. ရှေးနှစ်ထောင်ချီကတည်းက.. မြန်မာတွေ.. နွားသား.. တီးသမှ.. “တီးတီးတီးတီး”နေသေးတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့.. နှစ်၁၀၀လောက်ကမှ. အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်သိမ်း.. အလုပ်လုပ်တဲ့သူမလောက်ငှလို့.. လူမျိုးရေးရန်တိုက်ချင်လို့.. အကြောင်းကြောင်းတွနဲ့.. အိန္ဒိယက..ကုလားတွေတိုင်းပြည်ထဲသန်းချီခေါ်သွင်းခဲ့တာ…။
ဆရာစံရဲ့ တောင်သူလယ်သမားအရေးတော်ပုံဖြစ်စေတဲ့.. သူပုန်ထခြင်းရဲ့.. မူရင်းတရားခံ.. ချစ်တီးများပေါ့…
သူတို့က.. တနိုင်ငံလုံးဖြန့်ကျက်ဝင်.. မြန်မာရွာတွေထဲက.. ဗမာမတွေအကြွေးနဲ့.. တက်သိမ်းလိုက်တာ..ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ.. မယား.. ၅ယောက်..၁၀ယောက်..၁၅ယောက်နဲ့.. မြန်မာ-ဟိန္ဒူဟိုက်ဘရစ်. မျိုးဆက်တွေ.. အများကြီးထွက်လာတယ်.. သမိုင်းဖတ်ပြီး. အဲလို တွေးမိပါတယ်..
အိုဘယ့်.. ကော်ပီကက်.. ( Copycat)
အဲ.. အဲ.. ကော်ပီနွား..
မူရင်း.. ဟိန္ဒူနိုင်ငံကြီး(အိန္ဒိယ) ကတော့..(ဒီခေတ်မှာ) ကမ္ဘာ့နွားသားထုတ်လုပ်မှုအများဆုံး.. တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်နေပါသတဲ့..
.. နွားသားစားသူများကို.. သတ်ကြ.. အဲ..အဲ.. ရန်လုပ်ကြစေသတည်း..။
ကြုံလို့.. ချွန်တွန်းလုပ်.. ဖေါ်ချွတ်ပြရရင်.. မြန်မာတွေ.. ၀က်သားမစားဘူးဖြစ်ကြတာ.. ဘာကြောင့်လည်း.. သိလား..
မြန်မာ့ရိုးရာနတ်တို့ရဲ့.. ဘိုးအေကြီး.. ဗျဝိ၊ ဗျတ္တ .. ညီအကို မူဆလင်၂ယောက်ကြောင့်ပါ..
အိုဘယ့်.. ကော်ပီကက်.. အဲ..အဲ.. ကော်ပီဝက်.. :buu:
မတည့်ဆို.. လွတ်လပ်ရေးရပြီး. ဂန္ဒီကြီးလက်ထက်တင်.. ချကြသတ်ကြ..လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းတွေ တခြိမ်းခြိမ်းနဲ့လူတွေသိန်းချီသတ်ခံရပြီး..အိန္ဒိယကနေ ပါကစ္စတန်.နောက်.ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတိုင်းပြည်ခွဲထွက်သွားတာပါ..။
ဒါကြောင့်.. မွတ်ဆလင်တွေဟာ.. သူတို့ကို.. ကုလားတွေလို့ခေါ်ရင်မကြိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
မြန်မာတွေခေါ်တဲ့..ကုလားဆိုတာ.. လူများစုဖြစ်တဲ့.. ဟိန္ဒူတွေကိုယ်စားပြုတာကိုး..
သမိုင်းတွေဖတ်ပါ.. မအ,အောင်.. နှပ်ချမခံကြရအောင်ပေါ့..။
သူကြီး လက်တွေ့တဲ့ ပို့စ်ထင်တယ်….
ဟုတ်ပါတယ်… အသားစားတာ မစားတာထက်… နွားသတ်တာမသတ်တာထက်… အဲဒီအပေါ်မှာထားတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ သဘောထားတွေကိုပြန် ဆန်းစစ်သင့်တယ်… အသားမစားဘဲ နေနိုင်တဲ့ သူတွေကို ချီးကြူးပါတယ်… စားတဲ့သူတွေကို အပြစ်မြင်တာကို ကန့်ကွက်ပါတယ်…
သူကြီးကို အမဲသားကြိုက်တဲ့သူ… အမဲသားစားဖို့ စည်းရုံးတဲ့သူ… နွားတွေကို သတ်တာကို သဘောကျတဲ့သူလို့ အထင်မလွဲစေချင်ပါဘူး.. ကျနော်ထင်တယ်… အဲဒီလို ကွန်းမန့်တွေ တက်လာတော့မယ်ဆိုတာ…
သူကြီးဆိုလိုတာ ကျနော်တို့တွေရဲ့ ယထာဘူတ မကျတဲ့အမြင်တွေကို ပြောချင်တာပါ…
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာကို ကျန်မနေစေချင်ရင် ကျနော်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုပြင်သင့်တယ်…
ရှေးအကျဆုံး မြန်မာဆိုတဲ့ လူတွေဟာ… အမဲသားစားပါတယ်… ဝက်သားစားပါတယ်… မင်းကြီးမင်းလေးမကိုးကွယ်ပါဘူး… အတွင်းခံမဝတ်ကြပါဘူး…. အဲဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုရော မထိန်းသိမ်းသင့်ဘူးလား… :p
တကယ်တော့.. ကျုပ်လည်းအမဲသား တပါတ်နေလို့တခါ မစားဖြစ်ပါဘူး..
တခါတလေ.. ၂ပါတ်..တလတောင်ကြာသွားတာတောင်.. တခါ..မစားဖြစ်ပါဘူး..
ရက်ဒ်မိ(အသားနီ)တွေက.. အသက်ကြီးလာသူတွေနဲ့လည်း.. အဆင်မပြေပါဘူး..
နွားကိုနွားလို မြင်ဖို့လိုပါတယ်လို့.. ပြောလိုရင်းပါ..။
နွားမှာရှိတဲ့ နွားဦးနှောက်နဲ့.. ကြောင်းကျိုးတွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့.. စွမ်းရည်မရှိပါဘူး..။
ဒါကို.. လူက..နွားခေါင်းထဲအတင်းဝင်ပြီး. ကိုယ်ချင်းစာပြနေလို့မရပါဘူး..။
ဒါက.. လူသားအချင်းချင်း..( မသိစိတ်ထဲက.) ပြိုင်ကွက်.. နိုင်ကွက်.. အသာစီးရှာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
ဒါပေမယ့်.. နွားနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတော့.. အင်မတန်သတိထားရပါလိမ့်မယ်..
တကယ်တော့.. နိမ့်ကျတဲ့.. တိရိစ္ဆာန်ဘုံက.. သတ္တ၀ါတွေကြောင့်.. မြင့်မြတ်တဲ့..လူသားဘ၀တွေ ဆုံးရှုံးထိခိုက်နစ်နာတာ.. မဖြစ်သင့်ပါ..။
လူသားတိုင်း.. တန်းတူဖြစ်ပါကြောင်း..။ ဖြစ်သင့်ပါကြောင်း..။
လူတစ်ယောက် ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်ဖို့ မိဒ်ဆိုတဲ့ အသားဟာ
ကြီးရင် ဂေါ်ဇီလာ၊ သေးရင် ကြွက်အထိ အကုန်စားပါတယ်..
သို့သော်ကျနော်ကတော့ အမဲသားမစားပါ။ ဘာသာရေးကြောင့် ဟိုကြောင့်
ဒီကြောင့်ရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. သနားလို့ပါ။ တခါ မုစ်တွေ အစ်နေ့ နွားလည်လှီးတာ
မျက်စိရှေ့မြင်ပီးကတည်း အဲ့နွားကိုကြည့်ပီး သနားစိတ်ဝင်သွားတာနဲ့
မစားဖြစ်ကြတာပါ။ စိတ်က ဘာမှသိပ် အစွဲမထားပဲ…
သမာအာဇီဝနဲ့ ရှာလို့ ရတဲ့ ငွေနဲ့ စိတ်သန့်သန့်ဝယ်စားနိုင်ရင်တော့
ဒါကြောင့် ဘုရားကလည်း ရဟန်းတော်များကို ကိုယ့် ကြောင့် သတ်တယ်လို့ သိရင်
မြင်ရင် ၊ ထင်မိလျှင် မစားပါနဲ့ လို့ပညက်ထားပါတယ် ။
ဆိုတော့ …… မမြင်ရတာကိလေသာ သူ့ ဟာသူငြိမ်း၏ ပေါ့ ဗျာ
ကိုရင်စည်သူ ကျေးဇူးနော် ။
လူတကာတွေ အမဲသားမစားဖို့ ရေးကြပြောကြပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း ကြိုက်တော့ မရှောင်နိုင်ဘူး။
ကိုယ့်ဖာသာတော့ အကြောင်းပြချက် မပေးတတ်ဘူး။
ကိုယ့်လိုပဲ အမဲသားကြိုက်တဲ့ တူလေးက မောင်ဂီရေးသလို အကြောင်းပြတယ်။
အကောင်သေးသေးလေးတွေဆိုရင် လူတစ်ယောက်စားဖို့ကို အများကြီး သတ်ရတယ်။
နွားတစ်ကောင်ဆိုရင် လူတွေအများကြီး စားလို့ ရတယ်တဲ့လေ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက.. တတိယ လိုက်တယ်.ဆိုလား..။
ကု လား ဖြူ အ မေ ရိ ကန် တွေ က ကျ နော် တို့ ထိုင် ဝမ် နိုင် ငံ ကို အ သား ကျစ် ဆေး ( lean meat powder
) ပါ တဲ့ အ မဲ သား ကို အ တင်း ဝယ် ခိုင်း တယ် ဗျ ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ..ကိုရာမညရေ..နွားကြောင့်တော့ မီးမလောင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က နွားသတ်တာ မကြိုက်တဲ့ လူတော်တော်များများက..နွားတောင် သတ်တာမကြိုက်တာ…သူများကို မီးလောင်သေစေတာမျိုး
လုပ်ပါ့မလားဗျာ :hee: အဲ..အခုဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် အကြမ်းဖက်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ လက်မရွံ့ ချွမ်းအားချဉ် လိုလူမိုက်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံထားသူတွေကတော့..အမဲသား သွားကြွေးကြည့်
ပါလား အကောင်လိုက် မျိုပြ ပါလိမ့်မယ်။ အရက်နဲ့ မြည်းဖို့ အိမ်တောင်သယ်သွားမယ့် ဟာမျိုးတွေ။ အဲ..သာပေမင့် ခုနကလို နွားသတ်တာ မကြိုက်တဲ့ သနားကြင်နာတတ်တဲ့ လူများကတော့..နွားအတွက် အမုန်းမပွားရင်တောင်..အခုလိုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ရှေ့ကနေ ၀င်ကာကွယ်ပေးချင်စိတ်တွေ လျော့နဲသွားလိမ့်မယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေ မှာဝင်မပါပေမဲ့
ဘာသိပါသာပဲနေတော့မှာပေါ့ ဒီလိုလူမျိုး ငါအသက်စွန့် ၀င် ကယ်တင်ရအောင် မတန်ဘူးလို့တွေးမယ်လေ။
နောက် ဥပမာ တစ်ခုဗျာ..ဆင်မလိုက် ၀က်သတ်ကျင်းမှာ(အခုတော့အဲဒီမှာ မရှိတော့ပါ) ၀က်သတ်သမားနှစ်ကောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိုက်ကြေးခွဲရင် ရန်ဖြစ်မယ်ပေါ့..ဘယ်သူမှ ရဲလည်းတိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ၀င်လည်းဖြန်ဖြေမှာ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။
တော်တော်များများက ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဒီနှစ်ကောင်လုံးသေသွား အေးတယ်ဆိုကြည့်နေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်..အဲသလိုမဟုတ်ပဲ ရပ်ကွက်ထဲက လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ၀က်သတ်သမားက မိုက်ကြေးသွားခွဲရင်တော့.. ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့လူတွေက နေမလား….၀င်ဖြန်ဖြေမယ်..ရဲတိုင်မယ်…ပိုဆိုးရင်..ဟိုကောင် ၀က်သတ်တဲ့ကောင်ကို..ဆွမ်းကြီးဝင် လောင်းကြမှာသေချာတယ်။ အဲသလို အမြင်လေးတွေရှိတယ်ဗျ။ ဒါပါပဲ နွားကိုနွားလိုမြင်ခိုင်းသလို…လူကိုလူ လို့မြင်ကြည့်ပေးပါ။…တစ်ခုဖတ်လိုက်မိတာ ပြောမယ်..ဟိုတစ်လောက မီးလောင်တဲ့မြို့ကြီးမှာ..ဘာသာခြားအိမ်တစ်အိမ်က..မတူတဲ့ဘာသာခြား ဘုရားသားဆိုသူများကို ဆွမ်းလောင်းတာ ၁၀နှစ်ဆိုလား ၂၀နှစ်ဆိုလား ရှိပြီတဲ့။ အဲ…၀ုန်းဝုန်းတွေပြီးသွားတဲ့ အခါကျတော့ သူဘေးကအိမ်တွေ အားလုံးမီးရှို့ခံရတယ် ဆိုလား ဖျက်ဆီးခံရတယ် ဆိုလား…သူ့တစ်အိမ်ပဲ ဘာမှမဖြစ်ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့။ တစ်ကယ်လား အဟုတ်လား ဆိုတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ချင့်ယုံပြီးတော့ အဲဒီက လူတွေပဲ မေးကြည့်ပါလို့ ပြောပါရစေ :hee:
ယုံပါတယ် နောင်တော် garuda ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ဆက်မပြောပဲ ထားခဲ့ တဲ့ လူကို လူလို့ မြင်စေချင်ပါကြောင်း ဆိုတာ
ဖြည့် ပေးတာကျေးဇူးပါဗျာ ။
အစ်ကိုပြောတာမှန်ပါတယ် ။ရိုင်းသူရှိသလိုယဉ်ကျေးသူများလည်းရှိပါတယ် ။
စားလည်းစားပါတယ် ။ သူ့အိမ် အလှူခံလာလည်း ထည့် လိုက်တာပါပဲ ။
မည်သူမဆို လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ရင် ပြဿနာကင်းပါတယ် ။
အပေါ်က ကွန်မန့် ချီးမြှင့်ပေးသွားသော
မမ ၊ အလင်းဆက်နဲ့  Don Jaun Ronald တို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
The point is if there is no slaughter, we can not have meat. What you eat and what you don’t is how you accept your believe. Religious involves everywhere in Burma, In this case No comment.
Friends always ask me to try Kobe beef when I visit Kobe in Japan.It is quite expensive kind of luxury meal..and ..Yummy for meat lover.
It is impossible to get the meat for its marbling and tenderness in Burma. Most are bloated with water and if you chew it, you feel like your are chewing rubber. So mind tricking, you are eating rubber, notameat.
This is how they call Kobe beef…The cattle get luxury life, getting massage and having sake (rice wine) before slaughtered.
The wagyu cattle bloodlines eventually developed some unique genetic characteristics, such as the abundance of marbling. Because these wagyu cattle cannot exercise on the limited Japanese pasturelands, workers massage their muscles to prevent soreness and loss of appetite. Believing thatasoft skin produces more tender meat, Kobe beef ranchers also rub the wagyu cattle’s hides with sake,aJapanese rice wine.
နွားကိုနွားလို မြင်သူများအတွက် နောက်တစ်ခုတွေးရမှာက သြစတြေးလျက တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကို သူတို့ထွက်ကုန် နွား၊ သိုးစသဖြင့် တင်သွင်းတယ်။ တင်သွင်းတာကမှာ သင်္ဘောကြီးနဲ့ အကောင် ထောင်သောင်းချီပြီးပို့တာ။
ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်၂နှစ်က ထင်တယ်။ မလေးရှားလား/အင်ဒိုနီးရှားလားမသိ နွားတွေကို ကောင်းမွန်စွာ မထားပဲ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းလို့၊ ဂရုမစိုက်ပဲ ပစ်ထားလို့ ဆိုပြီး ပို့ကုန်တွေရပ်ပစ်ဖို့ ဖြစ်သေးတယ်
နောက်တော့မှ သဘောတူညီချက်တွေယူပြီး ဟိုက ကောင်းမွန်စွာ ထားမယ်ဆိုတော့မှ ပြန်ပို့ပေးတယ်။ အဲဒီနွားတွေက သေဖို့သွားကြတာလေ။ မသေခင်လေးမှာ အနှိပ်စက်ခံရသေးတာကို အနောက်နိုင်ငံက လူတွေတောင် လက်မခံကြဘူး။
ပါကစ္စတန်ကို သိုးတွေပို့တော့လည်း အဲသလိုဖြစ်သေးတယ်ထင်တယ်။ အဲဒါပဲ။..ဒီမှာတော့ တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်မှု ဥပဒေဆိုတာတွေရှိတယ်ဗျ။ ထောင်တောင်ကျနိုင်တယ်။အဲသလို နှိပ်စက်မှုမျိုးတွေ
ကျွန်တော်ကိုတိုင် တွေ့ဘူးတယ်..ရက်ကြီးရက်မြတ်တစ်ချို့အတွက် တိရိစာန်တွေသတ်ဖို့ ခေါ်လာရင်း လမ်းမှာ ရိုက်တာနှက်တာတွေ တွေ့ဘူးတယ်။ဒါပေမယ့်ကြာခဲ့ပါပြီး။ ၁၀နှစ်အရှေ့ ပိုင်းအချိန်ကပါ အခုတော့မသိဘူး။
သေရတော့မယ့်ကိစ္စဗျာ..ခင်ဗျားလည်း ကျုပ်ကို အမှီပြုပြီး ကုသိုလ်ယူမယ်ဆိုရင်..စိတ်ထားကောင်းကောင်းလေးနဲ့
ကုသိုလ်ယူလို့ရအောင်…အနည်းဆုံးသက်သက်သာသာထားပြီး ရေလေးနဲ့ မြက်စိမ်းစိမ်းလေးနဲ့ ကျွေးပါလားဗျာ။။
နောက်နေ့ကျရင် လည်စင်းပေးပါ့မယ် :hee: အင်္ဂလန်မှာရော..ဥရောပဖက်မှာရော..နွားအသားထုတ်တဲ့ စခန်းတွေမှာ under cover သတင်းထောက်တွေ ၀င်ပြီးတော့ စပိုင် ကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်ပြီြး ပန်ပြကြတယ် တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်ဆက်မှုနဲ့ တရားစွဲကြတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေ အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ကြတယ်။ ဒီလိုလေ..အဲဒီထဲက နဲနဲမှတ်မိတဲ့ တစ်ကွက်ကို ပြောရရင် နွားကိုသူတို့က လည်ပင်းကို စက်နဲ့ဖြတ်တာဗျ။ အဲတာတစ်ချက်ထဲနဲ့ ပြတ်ပြီး ကိစ္စတုံးရမယ့် ဟာကို
သေသေချာချာ မချိန်ထားတော့ နွားက ပြတ်ရမဲ့နေရာ မပြတ်ပဲနဲ့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် နဲ့ ဖြစ်နေရော
ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ၂မျိုးရှိတယ်ဗျာ။ တစ်ကယ်သေပြိးမှ အရှိန်နဲ့ ဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ မသေသေးပဲ နာကျင်မှုနဲ့ ရုန်းကန်ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေတာနဲ့ ကွာတယ်ဗျ။
နားလည်တဲ့ သူတွေကတော့ ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက လျှပ်စစ်တုတ်နဲ့ တို့တာ။ အမှန်မှန်က အဲဒီတုတ်က နွားကိုရပ်နေရင် ဆက်သွားအောင် နဲနဲလေး တို့ပေးဖို့ပေးထားတာ..
သူတို့က တစ်ခါတဲ အဲဒီတုတ်နဲ့အကြာကြီး တို့ပြီးထားတာနောက်ဆုံးနွားက ဗိုင်းကနဲပစ်လဲပြီး မထနိုင်တော့ဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ခြေလေးချောင်းရှိတဲ့နွားတောင် ပြန်မထနိုင်ဘူးဆိုတော့ လူသာဆိုရင်
လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်မှာ သေဒဏ်ပေးခံရသလိုနေမှာ။နောက် မိးသတ်ပိုက်လိုမျိုးနဲ့ နွားကိုရေဆေးတာ နဲနဲပဲဖြန်းရမှာကို အတင်းပိုက်နဲ့ထိုးတော့ နွားလဲပြီးမထနိုင်အောင်ပဲ။
အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဘာဥပဒေမှ မရှိဘူး လူတွေကတိရိစ္ဆာန်တွေကို လုပ်ခြင်ရာ လုပ်ကြတယ်။ နှိပ်စက်ကြတယ်။ နွားတွေမျက်ရည်ကျတာ မြင်ဘူးကြလား?
(မမြင်ဘူးရင် you tube မှာရှာကြည့်ပေါ့ ရှိရင်ရှိမှာ )ကျုပ်လည်းနားမလည်နိုင်ဘူးဗျ ဘာလို့လဲဆိုတာ။ တကယ်ဗျာ သူတို့ကို သတ်မယ်ဆိုရင် သိသလိုပဲ မျက်ရည်ကျတာဗျာ။
သိပံ္ပမောင်ခိုင် ကိုပဲ သိပ္ပံနည်းပညာအရ ဘယ် နိမ့်ကျတဲ့ စဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ဦးဏှောက်အပိုင်းက မျက်ရည်ကျမှုဖြစ်စေတာလည်း မေးကြည့်ရမယ် :harr:
အနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာ…ဘာသာမဲ့ များပေမဲ့…ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ကို တိရိစ္ဆာန်လို့မြင်ပေမဲ့ သတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အကောင်းဆုံးနဲ့
အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြတယ်။ အဓိက ကတော့ ဗမာပြည်မှာ များသောအားဖြင့် ရိုးရိုးကိုယ်ပိုင် အလှူတွေမှာ သတ်သတ်လွတ်အလှူ၊ ပံ့သကူသား အလှူ နဲ့
ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီး/တမင်သက်သက်ရည်ရွယ်ကာ မှာပြီး အလှူလုပ်ကြပေမယ့် နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေမှာဆိုရင် သတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းကို အားလုံးနီးပါးရှောင်လိမ့်မယ်လို့
ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူများတွေက သူတို့ရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ သတ်ဖြတ်မှုလုပ်တယ်ဆိုရင်..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသူတွေ အတွက်ကတော့ shocking ပါပဲ။ ကျွန်တော့
အတွက်ကတော့ အေးဆေးပါ..ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေ အတွက်စဉ်းစားပေးပါလား။ ဥပမာ လမ်းပေါ်မှာ မြင်သာအောင် နွားတွေခေါ်သွားတာမျိုး၊
နှိပ်စက်တာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်၊ လူမြင်ကွင်းမှာ မဟုတ်ပဲ အကာအရံနဲ့ ကိစ္စတွေပြုကြ ဆိုတာလိုမျိုးတွေပေါ့။ ဒီမိုကရေစီကို သွားနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ဗျာ
ဥပမာ…ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားမှာလူတစ်ချို့ ဒညင်းသီးသိပ်ကြိုက်ကြတာရှိတယ်။ လွပ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံဆိုပြီး မြန်မာပြည်မှာလို စားချင်တဲ့နေ့တိုင်း စားလို့မရပါဘူး
အလုပ်..ကျောင်းသွားရတာဆိုတော့…စနေတနင်္ဂနွေလို နေ့မျိုးမှာ မှစားကြရပါတယ်။ နို့မို့ဆို ရုံးမှာ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း အောင်နံကုန်မှာပေါ့။
အဲဒီတော့ ဗမာပြည်သူလူထု အသိပညာမကြွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြေရာပြေကြောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင်စဉ်းစား ဖြေရှင်းရင်ရမှာပါ။ ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး စဉ်းစားစရာလေး အဖြစ်ပါ။ ဘယ်သူဘယ်သူ့ကိုမှ ငြင်းခုန်ခြင်းမဟုတ်။
နောင်ကြီး garuda ခင်ဗျာ
အားဖြည့် ဆွေးနွေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။သူကြီးဦးခိုင်လာပါလိမ့် မယ်
သိပ္ပံမောင်ခိုင် ရောက်ရာအရပ်က ပြန်လာဘါ
ကိုဘေး အကြောင်းအနည်းငယ်ကြားဖူးပေမယ့်သေသေချာချာမသိခဲ့ ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sliver Twig ခင်ဗျာ
လွန်ခဲ့ တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်က ရန်ကုန်လေဆိပ်အနီးက မီလီယံကွိုင် စားသောက်ဆိုင်မှာ ဂျပန်ပြန်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ 
ကိုဘေး စတိုင်ကင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့  BBQ ကိုမြီးစမ်းဘူးပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ထုံးစံအတိုင်း ခိုင်းနွားအိုများဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝါးမရ ဖဲ့ မရနဲ့ 
နောက်ဆုံး အခြားဟာမှာစားပြီး ပြန်ခဲ့ ရပါတယ် ။
ခုလို ဝင်ရောက် ဖတ်ပေး ၊ မှတ်ချက်ပေး တာကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ
အမဲသားစားဖို့ စားကြဖို့ ကို နိုင်ငံရေးအရလဲ ထောက်ခံပါတယ်။
ဘာသာရေးအရလဲ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအယူမှာ အမဲသားမစားရတာ မစားသင့်တာ မပါပါဘူး။
တဖက်ကလဲ မစားတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုလဲ နားလည်ပါတယ်
နွား ဆိုတာက သူတို့အဖို့ ရဲဘော်ရဲဘက် စီးပွားဘက် မိသားစုဝင်ပါ..။
ကျုပ်က ကြောင်ကို ချစ်တတ်တယ်..
အဲဒါ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြောင်တွေနဲ့ အနေများလာလို့။
အဲဒီတော့ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံကြိုက်လို့ လူတစ်ချို့ ကြောင်သားစားတဲ့အကြောင်း ကြားရရင်
ကြားရရုံနဲ့တင် စိတ်ထဲ အမည်တပ်ဖို့ခက်တဲ့ ခံစားမှု့မျိုးဖြစ်တတ်တာ သတိထားမိတယ်။
ကိုယ်တိုင်စားဖို့ကတော့ ဘယ်လိုမှကို မဖြစ်နိုင်တာပဲ….
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပို့စ်ကအဆက်လို့ပဲ ကျွန်တ်ာယူဆပါတယ်….အဲ့ဒါကြောင့် နွားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းလေးကို ရှင်းချင်ပါတယ်….
ရေးထားတဲ့ အထဲ နွားမသတ်ပါနဲ့…နွားသားလုံးဝ မစားပါနဲ့ လို့ ရေးမထားပါဘူး…
လို့ ရေးထားတာပါ…ဒီစာကြောင်းရဲ့ သဘောကို ဘယ်အချိန် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ပြီး သဘောပေါက်မလဲ ဆိုရင် အစ်နေ့ မတိုင်ခင် နှစ်ပတ်လောက်အလို မြို့ထဲ တပတ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါ….နွားတွေဆွဲပြီး တဟေးဟေး နဲ့ ပျော်ပွဲဆင်နေကြတာ…သတ်ပါ..မသတ်နဲ့လို့ မပြောပါဘူး…ဒါပေမယ့် သိုသိုသိပ်သိပ် လေးတော့ သတ်ကြပါ…အစ်နေ့မှာ နွားသတ်လို့ ထွက်လာတဲ့ သွေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့မြို့က ချောင်း တစ်ချောင်းလုံး သွေးချောင်း တနေကုန် စီးနေလို့ ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ အဲ့ဒီနေ့ဆို စိတ်မကောင်းလို့ မြို့ထဲ သိပ်မထွက်ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး…သူတို့ဘာသာဝင်တွေများတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သတ်စမ်းပါ…ကြိုက်သလောက်…ဘာမှမဖြစ်ဘူး…မြန်မာပြည်မှာတော့ အိမ်ရှင် နိုင်ငံသား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေကိုတော့ နည်းနည်းလေးစားဖို့ ကောင်းပါတယ်…ဥပမာဗျာ…သူတ်ု့ ပလီရှေ့မှာ ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင် သွားဖွင့်လို့ ကောင်းပါ့မလားဗျာ…ဘယ်မြို့မှာမှ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာဝင်တွေ မလုပ်ပါဘူး…သူတပါး ဘာသာတရားကို
ပြန်လေးစားတတ်ရင်တော့ ဘာပြသနာမှ ဖြစ်ပွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး….(အိမ်ရှင်လို့ ရေးထားလို့ ထပ်အငြင်းပွားချင်ရင်တော့ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သာ သွားငြင်းပါ)…
အတူတကွ ရှင်တွဲ နေထိုင်ဖို့ ဆိုတာ တဦးကို တဦး အပြန်အလှန်လေးစားဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပါ….
ကိုယ့်လူ ဆိုလိုရင်းက တိရိစ္ဆာန်တွေကို အများအမြင်မှာ မသက်စေချင်ဖူး……
ဒါဟာ ဘာသာတခုအနေနဲ့ကောင်းမှူပြုတယ်လို့ နားလည်ပေမယ့် တခြားဘာသာတခုအနေနဲ့အကုသိုလ်အကြီးကြီးလိုမြင်နေတယ်……. (စိတ်မကောင်းဖူးပေါ့ဗျာ…)
အဲ့တော့ နွားမှ မဟုတ်ပါဖူး…..
တခြားဘာပဲသတ်သတ် ဘယ်သူပဲသတ်သတ် ယုက်စွအဆုံး ခြင်တောင် မလွဲသာမှ ရိုက်သတ်တာ ကောင်းပါတယ်…… (သဘာဝပတ်ဝင်းကျင်အမြင်အနေနဲ့ ကြည့်ရင် ခြင်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ခြင်းဟာလည်း သဘာဝဂေဟစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်….)
တက်နိုင်သရွေ လိမ်းဆေး ခြင်ဆေးခွေ ခြင်လုံးဇကာ တခုခုပေါ့……..
အဲ့ဒီတော့ ဆရာလေးအနေနဲ့ဦးတည်သင့်တာက တိရစ္ဆာန်တွေကို အများအမြင်မှာ မသက်စေချင်တာကို ဦးတည်စေချင်ပါတယ်……..
အထူးသဖြင့် သားကြီးငါးကြီးတွေပေါ့….. (နွား ဆိတ် သိုး မြင်း ဆင် စသဖြင့်ပေါ့……)
သဂျီးနဲ့ ကိုဘေးနွား သံသရာမှာ တလှည့်စီ ဖြစ်နေတာလေ….။ သဂျီးရေ… လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်လေးဆယ်ကျော် အစ်နေ့တခုမှာ ဗျားဂျီးသေခဲ့ဒါဗျ…. :eee:
အမဲသားက ပြောမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေစားရင် ကြီးထွားနှုန်းကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ
လည်း ကျန်းမာရေး အတွက်မကြာခဏ စားသင့်တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်က အမဲ/၀က် ဆို အသားတင် မက ကလီစာက အစ အကုန်စားတယ်။
မစားတာဆိုလို့ မစင်နဲ့ အရိုးလို ကိုက်မရတာတွေကလွဲလို့ အကုန်စား။
ဒါပေမယ့်…ကျွန်တော့ အိမ်က အမဲသား ၀ယ်မချက်ဘူးဗျ။ အဲဒီတော့
အိမ်မှာတော့ စားရခဲတယ်။ ကိုစည်သူ/ဦးပါလေရာ ပြောသလို ဘာသာရေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊
ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတစ်ချို့ တန်ဘိုးထားမှုလေးတွေ ရှိနေလို့ /သနားလို့/နားလည်မှုပေးလို့။
အသိတွေ/ဘာသာခြားမိတ်ဆွေတွေ လာပေးတာမျိုး ကြတော့လည်း ဘယ်လိုငြင်းမလဲ
ပေးတော့လည်း စားကြတာပါပဲ :harr: အားနာတတ်တယ်လေ..ဟီးဟီး။
အပြင်ဆိုင်တွေရောက် လည်းမှာစားကြတာပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်တော့ ဈေးက တမင်သက်သက်
၀ယ်ပြီး ချက်မစားဘူးဗျ။ သူ့စည်းလေးကို သူ့နေရာနဲ့သူထားတယ်ဗျာ။
အဲ..တခြား အမဲသား စားတဲ့အရပ်ကို ရောက်တော့လည်း စရောက်စ ၂နှစ်လောက်က
တစ်ပတ်ကို အနဲဆုံး ၃ခါက အမဲသားစားဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဘာမှမရှိတော့ဘူး
သူတို့က စားဘို့သက်သက်မွေးထားတဲ့ နွားတွေကိုး။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အရှေ့မှာ သတ်တာ
နှိပ်စက်တာကိုလည်း မမြင်ရဘူးလေ။ စီးပွားရေးအရ သတ်ဖြတ်နေတာကတော့
ဘယ်ဘာသာ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာ မဆိုရှိနေတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်လည်း…တိုးတက်လာပြီး
အသားစားနွားတွေ မွေးလာမယ်။ စက်ရုံနဲ့ ဘာနဲ့ အတည်တကျ သတ်မယ်ဖြတ်မယ် ဆိုရင်
ဗမာလူမျိူးဟာ တစ်ချိန်မှာ အမဲသား အစားဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သူကြီးကပို့စ်တောင် တင်ယူရတဲ့
အထိ ဖြစ်လာအုံးမယ်။ :harr:
အဲဒီတော့ ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာဟာ..ဘာသာရေးကြောင့်..အမဲမစားရ မဟုတ်ပါ ဟိုးအရင့် အရင်တွေ
ကတည်းက နွားတွေကို လူမြင်ကွင်းမှာ ဘယ်သူကိုမှ ဂရုမစိုက်(တာဝန်ရှိသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးကို ပေါင်းထားလိုက်ယုံပဲ)
နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ (mass killing) ရှိခဲ့လို့ အကြင်နာတရားထားတတ်တဲ့လူတွေက သတ်သူဖြတ်သူတွေကို
အကြင်နာတရားလျော့နဲ လာရာက တဆင့်မုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဘုန်းကြီးတွေက ကြင်နာမှုနဲ့
ဟောပြောတော့ နားမလည်သူတစ်ချို့က ဘာသာရေးအရမစားရဘူးတွေ ဘာတွေဖြစ်လာပြန်ရော။ နွားကိုနွားလို သဘောထားရင် ခွေးကိုရောခွေးလို
သဘောထားနိုင်ကြမလား မေးကြည့်ချင်တယ်။ ခွေးသားကြိုက်တဲ့ လူတွေကတော့ ခွေးကိုခွေးလို
သဘောထားစေချင်မှာပဲ :harr: ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ခွေးသားစားမှုဟာ အမဲသားစားတာနဲ့ အပြိုင်လို့တောင်ပြောရမလားပဲ။
အမဲသား/၀က်သားအစိမ်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလို ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းကြတာနော်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ သူတို့အတွက် ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့။ သြစတြေးလျ လိုနေရာမျိုး လာဖွင့်လို့ကတော့… တစ်ပတ်ခံရင်ကံကောင်း…၀က်ဝက်ကွဲ ဆန္ဒပြကြမှာ။
တရုပ်/ဂျပန်/ကိုရီးယား လည်းခွေးသားစားကြတယ်။ ဗမာပြည်မှာ လည်း သူတို့လောက် စီးပွားဖြစ်
ရောင်းရလောက်အောင် မစားပေမဲ့ စားကြတာပဲ။ ဆိတ်ကတုံးသား ရှလွတ်..
ဒူလာပျောက်၏။အိမ်ထောင်သည်ကျားများ အားကောင်းအောင် စားသင့်၏။ :harr:
သူကြီးက အိန္ဒိယ အကြောင်းပြောလို့ မလေးရှားမှာလို နိုင်ငံမျိုးမှာ မြို့ ပေါ်က ဆိုင်တစ်ချို့မှာ ၀က်သားရ
တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဗုန်းဘလအော ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား သတ်ဖြတ်ရင် သူတို့လက်ခံပါ့မလား..မသိဘူးနော်။
တွေးကြည့်စရာလေးများ သက်သက်ပါ။ အတွေးအမြင် မှားနေတာလေးတွေတွေ့ရင် ထောက်ပြကြပါ ဒါမှ အမှန်မြင်နိုင်မှာ
ဘာသာတရားတွေကလည်း ခက်တယ်ဗျာ..တစ်ချို့ဘာသာက ၀က်မစားရ တစ်ချို့ကအမဲမစားရ…ဘာသာခြားသူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်က သူတို့ဘာသာမှာ မြွေတို့ကျားတို့ သိမ်းငှက်တို့လိုဟာမျိူး မစားဖို့တားမြစ်ထားတယ်တဲ့ claws ပါတာတွေ မစား
ရဘူးဆိုလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း ဖုန်းကြီးတွေက အဲသလိုမျိုးတွေ စားလို့မရဘူးလို့ကြားဘူးတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘာသာတွေအားလုံး တိရိစ္ဆာန်ကို တိရိစ္ဆာန်လိုမြင်ပြီး အားလုံးစားချင်တာ စားလို့ရတယ်ဆို
ဘယ်လောက် ကောင်းလိမ့်မလဲနော်။ အခုတော့ နွားသားစားမှပဲ မြတ်သလိုလို၊ သတ်သတ်လွတ်စားမှပဲ နတ်ပြည်ရောက်မလိုလို
၀က်သားစားရင်ပဲ ငရဲပြည်ဆင်းရ မလိုလို။
စကားမစပ်…ကမ္ဘာလောကကြီး တစ်ခုလုံးမှာ လူကို လူလိုမြင်တတ်တဲ့ ထင်ရှားသူ လူသားများဟာ ၁၀ယောက်တောင်
ပြည့်ပါ့မလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်သိထားတာကတော့ ၂ယောက်ရှိပါတယ်။
လူသားဟာ.. လူသားဆန်စွာ.. ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်..တွေးတောတာ.. မင်္ဂလာပါဗျာ..
တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်ထဲဝင်စဉ်းစားရင်.. လူစစ်စစ်ကနေ.. တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့မပေါ့..။
တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ.. သူတို့နဲ့ထိုက်သင့်တဲ့ ဦးနှောက်ပဲရှိကြရှာတာပါ..။
ကွန်ပျူတာနဲ့ယှဉ်ပြောရင်.. ၄၈၆ကွန်ပျုတာထဲ.. ၀င်းဒိုးစ်၂၀၀၈ ကြီးအတင်းရမ်းခိုင်း.. တွက်ချက်ရေးသားဖို့.. excel 2013 ကြီးတင်လို့.. ဘယ့်ဖြစ်ပါ့မလည်း..
ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြီး.. ချစ်ရွှင်သနား တည်ကြားကြမ်းကြုတ် စက်ဆုပ်ကြောက်ရွံ့ ရဲဝံ့အံ့ဩတာတွေဖြစ်နေရင်.. လူကိုကျော်ပြီး.. ကမ္ဘာအုပ်စိုးနေ.. မာစတာဘ၀ရောက်.. ရှိနေကြတော့မပေါ့..။
နွားချစ်တဲ့လူဘေးမှာ.. နွားကိုရက်စက်မပြသင့်တာကလည်း.. လူသားဆန်မှုတခုပါပဲ..
နွားချစ်တဲ့သူကလည်း.. နွားမချစ်တဲ့သူတွေရှိရကောင်းလား.. မပြောစကောင်းပါ..။
ကိုယ့်အတွေးအခေါ်မှားတယ်..။ မှန်တယ်..။ တိုးတက်စေတယ်.. ဆုတ်ယုတ်စေတယ်..
ဒီခေတ်မတော့.. မီဒီယာတွေတော်တော်ဖွံ့ဖြိုးနေသမို့.. ပေတံကလွယ်ပါတယ်..
မိတ္ထီလာအရေးအခင်းကစတဲ့.. အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ..။
အဲဒါ.. ဒီခေတ်.. ဒီအခြေအနေမှာ.. လူသားတွေအများစုသတ်မှတ်တဲ့.. အမှန်တရားပါပဲ..။
မြန်မာတွေအတွက်.. အတိတ်..ပစ္စုပ္ပန်..အနာဂတ်.. အခြေအနေဆိုး..ဘ၀ဆိုးရောက်အောင်.. (မရည်ရွယ်ဘူးထင်ရပေမယ့်) ချွန်တွန်းဖြစ်သွားစေတဲ့..ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့.. ” စကားကြီး”တွေနဲ့အတူတူ.. သမိုင်းတရားခံတွေကို.. မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါကြောင်းရယ်..။
Tiger မျက်ချီး ထင်ပါတယ် သဂျီးမင်း
တိုက်ဂါး မျက်ရည် ဈေးကောင်းရနိုင်ကြောင်းပါ သဂျီးမင်း…….
ခိုင်ရယ်..ကိုပြောမယ်နော်..လူသားတွေမှာ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်မရှိရင်..တစ်ကမ္ဘာလုံး အလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
ဘာသာမဲ့/ဘာသာရှိ ဖြစ်ဖြစ် ကိုချင်းစာတရားဆိုတာနားလည်ရတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ကိုထဲ ၀င်ကြည့်တာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး
တိရိစ္ဆာန်တွေလို ခေါင်းမသုံးပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခုတ်ထစ်နေတာသာ တိရိစ္ဆာန်ထဲဝင်ကြည့်ပြီးကျင့်ကြံတယ်လို့
ပြောလို့ရတယ်။ အိုကေခိုင် ကိုအခု ၀ိုင်သောက် ပြီး အနားယူနေတယ်။ စဉ်းစားပြီးပြောရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေသိပ်မမန့်ချင်ဘူး။ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ မန့်ချင်တယ်။မနက်ဖြန်မှ
ဖြစ်ဖြစ် ပြန်လာခဲ့မယ်။မျှော် :harr:
သူကြီးရေ…ကျုပ်ပြန်လာပြီဗျို့!…တီဗွီကြည့်ဖို့ ဘက်ထရီအိုးလည်း..၀ယ်ခဲ့တယ်လေ မီးလည်းထွန်းလို့ရတယ် :harr:
ခိုင်ပြောတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်ထဲဝင်စဉ်းစားတယ် ဆိုတာဘယ်လိုဟာတုန်းဟင်။ ခိုင်ရေ
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင်..သားသတ်ရုံထဲမှာ လူမကြား/သူမကြား သတ်ဖြတ်နေတဲ့ ကိစ္စတောင်
လူ့လောက စားဖို့သောက်ဖို့ အတွက်မဖြစ်မနေခွင့်ပြုထားကြပေမဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေ ရှိလာရင်
လူတွေလည်း သနားကြင်နာမှုတရား ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ကန့်ကွက်သင့်ရင် အပြင်းအထန်
ခိုင်ရေ..Green Peace အဖွဲ့ကို ဘယ်သွားထားမလည်း…သူများတွေ စားဖို့ဝေလငါး သတ်တာပဲ
သူ့အပူလား..ဘာဖြစ်လို့ အသက်အသေခံပြီးတော့ အဲဒီဖမ်းတဲ့ဂျပန်တွေကို ကန့်ကွက်ကြတာလဲ။
နဲ့ အများကြီးဆိုင်တယ်။လူမှုရေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်…တစ်ခါတွေ့တာ ဟင်းလင်းပြင်မှာ လုပ်တာ
မြန်မာ ဆင်းရဲသားကလေး လေးတွေတောင် အသားအပိုင်းအစ အချို့ကိုလိုက်ကောက်နေတာ
တွေ့ရတယ်၊ တကယ်ဆို ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းထိခိုက်စေပါတယ်။ လူမြင်ကွင်းမှာသတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းဟာ
ကလေးသူငယ်များ၊ စိတ်မခိုင်သော သူများအတွက်လည်း မသင့်တော်ပါ။
နွားချစ်ခြင်း နွားမချစ်ခြင်းက အဓိကပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး..ခွေးသားရောင်းခြင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ် ပြတာက
မြန်မာပြည်အနေအထားမှာ နွားသည် အသားစားဖို့အတွက်မွေးထားသောနွားများ မဟုတ်သလို
လူနဲ့လည်း connection တွေရှိနေခြင်းကြောင့် လူအများအရှေ့မှာ နွားသတ်ပြီးပူဇော်တာကိုပဲ
ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ မသေခင် ခိုင်ပြောသလို တိရိစ္ဆာန်ကို တိရိစ္ဆာန်လို သဘောထား နှိပ်စက် သတ်ဖြတ် အောင်ပွဲခံတာမျိုး
ဖြစ်နေခြင်းကို ထောက်ပြနေတာ။ အဲဒါကြောင့် သားစားနွားမွေးမြူခြင်း၊ ထိုနွားများကို အများမြင်သာအောင် မဟုတ်ပဲ အေးအေး
ဆေးဆေး ကိုယ့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ ၀င်းအတွင်းမှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် သတ်ဖြတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း မျိုးဆိုရင် အခြေအနေ အမြင်တွေ
ဟာပြောင်းမသွားနှိုင်ဘူးလား? ဆိုတာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ ပြောရတာ ဝေးတယ်ဗျာ။ ကျုပ်ပဲဝေးလား ဘယ်သူပဲဝေးလဲတော့
မသိပါဘူး ခိုင်ရယ်။ ကျုပ်ဝေးတာပဲဖြစ်မှာပါ…အော် အောင်ဝေး အောင်ဝေး။
အတွေးအခေါ်မှားတယ်..မှန်တယ်..တိုးတက်စေတယ်..ဆုတ်ယုတ်စေတယ်..ဆိုတာ ဘယ်ပေတံနဲ့ တိုင်း
ရအောင်..သူကြီးလည်း..ဗမာပြည်နဲ့ ဝေးကွာနေတယ်..ဘယ်လိုတိုင်းမလဲ။ သူများပြောတိုင်းယုံမလား?
မြန်မာတွေက…ဟစ်တလာလို ဘာသာခြားတွေကို စိမ်ပြေနပြေ ဖမ်း အကျဉ်းထောင်ထဲထည့်ပြီး
ဇိမ်ခံသတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကြံစည်သူတွေ ရှိပေမဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ က ဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်သွားတာပဲ။
မဖြစ်ချင်ရင် အစကတည်းက နှစ်ဖက်လုံးငြိမ်ငြိမ်နေပေါ့။ အဲဒီအထိကရုဏ်း မတိုင်ခင်ကတည်းက ဘာသာခြားတွေ ဦးထုပ်တွေ
သူတို့ဝတ်နေကြ၀တ်စုံတွေ ၀တ်ပြီးရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်လာခြင်း။ ၉၆၉ တရားဟောပွဲဆိုတဲ့ နေရာတွေကို
ဘာသာရေးဆရာဆိုသူတွေက လာပြီး ရစ်သီရစ်သီလုပ်နေခြင်း၊ ဘာသာခြားမိန်းမက ဖြန့်ဝေတဲ့ စီဒီတွေကို
ရပ်ကွက်တရားဟောပွဲမှာ လာပြီး ခြေထောက်နဲ့ နင်းခြေဖျက်စီးပြခြင်းစသည်ဖြင့်ကြားရတယ်။အဲဒါတွေဟာ ရဲစခန်းကတောင်
လာရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖတ်ရတယ်။ ဟုတ်ခဲ့ရင်
ဒါတွေဟာ အုံကြွလာအောင် စနေခြင်း မဟုတ်ဘူးလား။ အဘက်ဘက်ကမျှကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် တင်ထား ဖွဘုတ်
က ကောင်ကလည်း ၉၆၉ မစခင်လား စပြီးလားမသိဘူး သူ့ နံရံမှာ တင်ထားတာက “ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော
ငါတို့ ဖက်ကတော့ လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ပြီးသွားပြီ” ဆိုတာမျိုး ခပ်ဆန်ဆန်တွေ တင်ထားတယ်။ ဘာတွေလုပ်
ထားလည်းတော့ ကိုလည်းမသိဘူးအေ။ ဗမာကို ဘယ်လိုကြွလာအောင်ဆွရမလည်းဆိုတာကို
အာဏာရူးတွေမှ မဟုတ်ဘူး..ဘာသာခြားအစွန်းရောက်တွေ ကလည်းသိတယ်။
ခိုင့်ဟာခိုင် ကြိုက်တဲ့ မီဒီယာပေတံနဲ့ တိုင်းပါရပါတယ်။ ရခိုင်ကတည်းက ပြည်ပမီဒီယာတွေ အမှားဖြန့်
ခဲ့တာတွေ မှတ်မိမှာပေါ့။ ကမ္ဘာကအော်တဲ့လူကအော်မှာပဲ…နားလည်မှုနဲ့ ကြည့်နေသူတွေက ကြည့်နေမှာပဲ
သစ်ရွက်လှုပ်တိုင်းသာ လိုက်ရီရရင်တော့…သူများတို့ ဆက်ကျော်သက်လေး တွေပြန်ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။
အစွန်းကတော့ ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်တုန်းက နှစ်ဖက်စလုံးရောက်နေပြီလေ။ ဒါသဘာဝပဲ။
မီဒီယာဆိုလို့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဗွီဒီယို ကလစ်တစ်ခုမှာ ပြောတာသတိထားမိလား…
“…..ဖက်ကို မပြေးဘဲ ဗမာဖက်ကို ပြေးလာကြတဲ့ အခါ အကုန်ဝိုင်းရိုက်ကုန်ကြတာ” အဲဒီ ဗွီဒီယိုဟာ
ဆက်တိုက်မလာပဲ၊ အဲဒီမတိုင်ခင် “ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကထုတ်ပေးလိုက်တော့တာဒါ” ဆိုတာပြီးတော့
ကြားမှာဖြတ်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြီးမှ “….ဖက်ကို မပြေး…”ကို ဆက်ပြောတယ်။ ဘာလို့လည်း
မသိပါ ထူးဆန်းပ။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဆက်တိုက်ပြောသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။
ပြီးတော့ ဒီလောက် အားလုံး ဒေါသ မောဟ တွေလွှမ်းမိုး နေတဲ့ အချိန်မှာ လွတ်တဲ့ ဖက်မပြေးပဲ ရန်မူတဲ့ဘက်
တဲ့တဲ့ပြေးတယ်ဆိုတော့ သိတော့ဘူးဗျာ။တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိမရှိတဲ့လူတောင် ငါ့ဆီ တဲ့တဲ့ပြေးလာပြီ
kill or be killed ဆိုပြီး ကြောက်ကန်ကန်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခုတ်မိမှာပဲထင်ပါတယ်။ ပြောပြချင်တာက ရုန်းရင်းဆန်ခတ်
ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒီလိုပဲသေကြကြေကြတာပါပဲ။ တစ်ချိန်က ဟောင်ကောင်ကို အမှတ်ရမိတယ်။ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေ ချကြရင်အဲသလိုပဲ။
ဒါးတွေနဲ့ ခုတ်ကြတာ..သေရင်လည်း အတုန်းအရုန်းပါပဲ။(ရုပ်ရှင်ထဲ မြင်ဘူးတာပါ)
ခိုင် ပြောတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် ဘ၀ဆိုးရောက်အောင် ချွန်တွန်းဖြစ်သွားစေတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်
တွေရဲ့.. “စကားကြီး”တွေ ဆိုတာတော့နှစ်ဖက်တွေးရင် စဉ်းစား စရာပဲ..ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘက်က
ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စကားလည်းဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သမိုင်းကတော့
တကယ်မှန်တာကို သိရင် တင်လိုက်ပါ။ ဒါမှ ဘာဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာနောင်လာနောက်သားတွေ သိဖို့ အရေးကြီးတယ်
တစ်နေရာထဲ ကွက်မတင်နဲ့ ဂဃဏန သိအောင်စုံစမ်းပြီးမှတင်ပါနော်။ ကျိန်စာတွေဘာတွေ တော့မပြောနဲ့
အကြမ်းဖက် သူတပါးကို သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုရှုံ့ချ တယ်။ သေဆုံးသွားသော မြေဇာပင်များအတွက်လည်း ကိုယ့်မိသားစုအဖြစ်
ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ရင် ၀မ်းနည်းတယ်၊ကိုယ်ကိုတိုင်အဲဒီနေရာမှာဆိုရင် လို့တောင် မတွေးချင်ဘူး။စဖြစ်ချိန်ကလွဲလို့ အခုဆက်ဖြစ်နေတာ
လည်း ပယောဂတွေပါတယ်ဆိုတာလည်း တော်တော်ကြီးကို ထင်မိတယ်။ ခိုင်ပြောတဲ့ ပြုပြင်ပြင်ဆင်သွားသင့် တာလည်း
အားရပါးရထောက်ခံပါတယ်။ အဲလွယ်လွယ်လေးတော့ မတွေးနဲ့ ပြုပြင်ရင်းနဲ့ ထပ်ပျက်မှာတွေလည်းရှိလာအုံးမှာပါ။
သြစတြေးလျမှာ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ် လေးနှစ်လောက်က ထင်တယ်။ လက်ဘနီး(စ်)တွေ (လက်ဘနွန်သား
များ) မူဆလင်လူငယ်များဟာ သြော်ဇီ မိန်းခလေးများ ယောက်ျားလေးများ ကို ကမ်းခြေ ၀န်းကျင်ဒေသတွေမှာ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ဓားနှင့်
ထိုးခြင်း၊ ၃/၄ယောက်လောက်က ၀ိုင်း၍ အနိုင်ကျင့်ခြင်း နောက်ဆုံးမုဒိမ်းကျင့်ခြင်းတွေ ပါဖြစ်လာပုံရတယ် သေချာတော့ မမှတ်မိပါ။
သူတို့ ဘာသာရေး ဆရာကပြောတယ်..သူ့ ကောင်လေးတွေအလွန်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သြော်ဇီမိန်းကလေးတွေဟာ အဲသလို မလုံ့ တလုံ
၀တ်လို့ အဲသလိုဖြစ်တာ သူတို့ရဲ့အပြစ်ဆိုလားပဲ။ အဲဒီမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လွန်လာတော့ မူလလက်ဟောင်းသြဇီ တွေက လူစုပြီး ဒီကောင်တွေကို
လာဆုံဖို့ စိမ်ခေါ်တယ်။ ဟိုကောင်တွေက ငပါးတွေ။ ချိန်းတဲ့နေ့ တကယ်လုပ်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ထွက်မလာတော့
ဒေါသဖြစ်ပြီး တွေ့တဲ့ မဆိုင်တဲ့ လက်ဘနီး(စ်) ဆိုင်တွေ အမျိုးသမီးပါမချန် ရိုက်နှက်တာတွေ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ရော။
နောက်ဆုံးတော့ ရဲက၀င်လာတော့ ဒေါသမပြေတဲ့ သြဇီတွေ ရဲနဲ့ပါငြိပြီး ရဲတွေကရိုက်ရတော့တာပေါ့။ ဇာတ်လမ်းက သေသေချာချာတော့
မမှတ်မိဘူးဗျာ။ အကုန်တော့မှန်ချင်မှမှန်မယ်။ အကြမ်းဖျင်းတော့မှန်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ အဲသလိုဗျ။ အဲသလိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင်…ခံရပါများရင် မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်လုပ်မိကြတယ်။
အဲ..အဲသည်တော့ ကြားဂျောင်ခံရတဲ့သူတွေကခံရတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းကလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အပြည့်ရှိလို့
လူမသေပေမဲ့ ခံရတဲ့သူတွေက တော်တော်ခံရတယ်။ အကြမ်းဖက်တဲ့ သူတွေလည်း ရဲရိုက်တာကြောင့် တော်တော်လေးအထိ
နာတယ်။ လက်ဘနီး(စ်)တွေက မူရင်းသြော်ဇီတွေထက် လူနည်းစုဖြစ်ပေမဲ့ စည်းလုံးကြတယ်။ ပါးတယ်နပ်တယ်။ ဒုစရိုက်မှု
တော်တော်များများလည်း သူတို့ကိုင်ထားကြတယ်။ မကောင်းတဲ့ ဖက်ကလူတွေ ပြောတာပါ။ ကောင်းတဲ့ လက်ဘနီးစ်တွေ
လည်း အများကြီးပါ။ နောက် လက်ဘနီး(စ်)က ခရစ်ယာန်လည်းရှိတယ်။ အဲဒီဘက်က လူဆိုးထွက်တယ်လို့ ကျွန်တော်
သိသလောက်တော့ မကြားမိသေးဘူး။ အဲဒီတော့ခိုင်ရေ..ဘယ်အရာမဆို ဗမာပြီပြီ သွေးပျက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေများပြီး ကျိန်စာ
မိတော့မှာပဲထင်မနေသင့်ကြောင်း။ ဗမာတွေသတိလွတ်တဲ့ အချိန်ကျလည်း ခံရရင်ဒီထက်တောင် ဆိုးရင်ဆိုးအုံးမယ်။
စောင့်ကြည့်ပါ….ပွဲတွေက ကြည့်ကောင်းနေပြီ။ ရခိုင်မှာ ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက် ဆန္ဒပြ တယ်ဆိုလား။ ရခိုင်အရေးတုန်းက
ဘာသာရေး အဆောက်အဦး တစ်ခုမှာ လက်နက်တွေမိတာကို အစိုးရ ထုတ်မပြောပဲ ထိန်ချန်ထားလို့ဆိုလား။
ကြားတာတော့ ရခိုင်မှာ ကျုးကျော်သူတွေ မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်တာဟာလည်း အရင်ကတဲက ဖြစ်နေတာ ခဏခဏတဲ့။
ဘာပဲပြောပြောလေ..ထင်တာ..ကြားဘူးတာ လေးတွေပြောတာပါ။ ထုံးစံအတိုင်းချင့်ယုံပါဗျာ။အမှားလေးတွေလည်း
ပါပေ မပေါ့။ လူတွေပဲလေ အမှားနဲ့တော့မကင်းနိုင်ဘူး။ အမှားကြီးမဖြစ်အောင်တော့ သတိထားရမယ်။တော်ကြာ
၂ မိန်းမ ၄ ဦးယူခြင်း (အားလုံးမဟုတ်ပါ..ယူသောသူများကိုသာ)
၃ ဘာသာခြားမိန်းများယူ၍ သာသနာပြုခြင်း….
၅ …..?… ဆက်ရန်…. :
4. ဗုဒ္ဒကုသိုလ်..နှင့် အလာကုသိုလ် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခြင်း
5. မုတ်ဆိတ်များထားခြင်း/ခေါင်းခြုံခြင်းများကိုလည်း မပြု လုပ်လျှင်ကောင်းမည်..(မိမိရုပ်ကိုမိမိဆိုးအောင်လုပ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။)
ဘယ်သူက လာရိုက်မယ်ပြောလို့လဲ Phaung Phaung ရယ်
နွားနို့သောက်ပြီး (နွားထွက်ပစ္စည်း) သုံးပြီး နွားနဲ့ကင်းတယ်လို့လဲ ပြောမရဘူး..
ကြက်သားမစားဘူး ကြက်ဥပဲ သောက်တယ်ဆိုလဲ ဘယ်သင့်ပါ့မလဲ..။
ခြေတဖ၀ါးအောက်မှာတောင် မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့သတ္တ၀ါတွေကို သေချာကြည့်ရင်
သိန်းသန်းများစွာ ကိုယ်ခြေလှမ်းတိုင်း သတ်မိနေတာပါပဲ..။
ကံကိုမသတ်နိုင်သေးလို့ ကံခိုင်းသမျှ ပြုနေရောက်နေရတာ…။
လူ့စည်း ဘီလူးစည်းလေး ထားပြီး စားသောက်ရင်တော့.. အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ..။
ကျုပ် ရွှေညာသား တစ်ယောက်ပါ …
နွား အကြောင်းတော့ မပြောနဲ့ …
နွားပုံစံ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ …
ဘယ်ရွှေ့ဘယ်ပုံ ဆိုတာ ကွက်တိ ဒတ်ထိ ပြောနိုင်တယ် …
ဒီနွား သေရင် ဘယ်နှစ်ပိဿာ ထွက်မယ် ဆိုတာကိုပါ
အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း နိုင်တယ် ….
ကဲ …. ကျုပ်ဆီက နွားပညာ သင်ချင်သူများ
ရင်းနှီးတယ်ဆိုပြီး အလကားတော့ မရဘူးနော့ …
တန်ရာ တန်ကြေး ပေးမှပဲ … ဟဲဟဲ …